OnePlus6အတွက် Official Teaser video ထွက်ရှိလာပြီ – AsiaApps
OnePlus6အတွက် Official Teaser video လေးဟာတော့ မနေ့ကပဲထွက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၄ စက္ကန့်သာကြာမြှင့်ပြီး OnePlus ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ “The Speed You Need” ကိုသာထင်းနေအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
OnePlus ရဲ့နောက်ဆုံး Flagship တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OnePlus6မှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 chipset အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ OnePlus CEO ဖြစ်သူ Pete Lau ဟာ Cnet မှာပြောကြားထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တော့ OnePlus6Teaser video လေးမှာပြသွားတဲ့ “The Speed You Need” ဟာ Chipset နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုမြန်ဆန်နေတာကို ရည်ညွှန်းနေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် OnePlus6ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ Notch ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် iPhone X မျက်နှာပြင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Notch လိုမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် iPhone X notch လောက်တော့မကြီးဘူးဗျ။ Notch ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး OnePlus ဟာတော့ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေဆီက တုံ့ပြန်မှုကောင်းကောင်းတော့မရရှိခဲ့ပါဘူး။ OnePlus6အတွက်လက်တလောမှာ ဒီ Rumor ၂ ခုပဲထွက်ရှိပါသေးတယ်။ (ကျွန်တော်ကြားမိသလောက် ?)
ထွက်ရှိမယ့်ရက်ကိုတော့ တရားဝင်ကြေညာထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် မေလ (သို့) ဇွန်လ လောက်မှာဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားလို့ရပါတယ်။ OnePlus ကတော့ ဘယ်လိုမေးမေးပြောမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးဗျ။ ကြားထဲမှာထွက်ရှိလာဉီးမယ့် OnePlus6အတွက်သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Asiaapps ကိုမေ့လို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်… ?)
Android, Oneplus, Teaser Video